အပျိုစင်​ဘဝကို ကို ​ဒေါ်လာသိန်းသန်းချီပြီး ​ရောင်းချနိုင်​ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ​ကျော်​ အမျိုးသမီး ၅ ဦး... - Askstyle
အပျိုစင်​ဘဝကို ကို ​ဒေါ်လာသိန်းသန်းချီပြီး ​ရောင်းချနိုင်​ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ​ကျော်​ အမျိုးသမီး ၅ ဦး…
အပျိုစင်​ဘဝကို ကို ​ဒေါ်လာသိန်းသန်းချီပြီး ​ရောင်းချနိုင်​ခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ​ကျော်​ အမျိုးသမီး ၅ ဦး
ဘရားဇီး နိုင်ငံသူ မော်ဒယ်သရုပ်ဆောင် ကတာရီနာ မစ်လိုရီနီ (အသက်၂၁ ဟာ သူမအပျိုဘ၀နဲ့ပထမဆုံးအိပ်ရမယ့် ဈေးနုံးကို (၂၀၁၂)$780,000,
ဒေါ်လာ ခုနှစ်သိန်း၈သောင်းနဲ့ ဈေးပြိုင် လေလံတင်ခဲ့ရာမှာ အာရပ်နိုင်ငံမှသန်းကြွယ်သူဌေးက ဒေါ်လာ ၁.၅သန်း နဲ့ ဈေးဖြတ်ခဲ့ပြီး အတူအိပ်ခဲ့ပါတယ်။
TVရုပ်သံကနေ ဘာသာ ၁၁ ဘာသာနဲ့တိုက်ရိုက်ပြခဲ့ပါတယ်။(ရခဲ့သည့်ငွေမှ ၉ ၀ ရာကိုင်နုန်းအား သူမမြို့တိုးတက်ရေးအတွက်လှူခဲ့သည်)
2. Raffaella Fico: $1.3916 million(၂၀၀၈)The 26-year-old Italian model claims
အသက် ၂၆နှစ် အီတာလီနိုင်သူ မော်ဒယ် ရဆယ်ရယ်လာ ဖီကို ဖြစ်ပါတယ်။
သူ မကတော့ ယူရိုဒေါ်လာ တသန်း နဲ့သူမရဲ့အပျိုစင်ဘ၀ကို ရောင်းစားခဲ့တယ်လို့ တွေ့ ဆုံးခန်းတခုမှာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။
သူမကို သန်းချီပေးပြီး တညအိပ်ခဲ့သူဟာဘယ်သူလို့မပြောခဲ့ပေမယ့် အီတလီ ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်းလို့ တရားဝင်မဖေါ်ပြတဲ့သတင်းတွေက ရေးသားထားပါတယ်။
ဆေးကျောင်းသူ နိုင်ငံမဖေါ်ပြ သူမရဲ့အပျိုစင်ဘ၀ ပထမဆုံးည အတွေ့ အကျုံကို ဆေးပညာဆိုင်ရာ သုတေသီတွေကို ရုပ်သံမှတ်တမ်းတင်ရိုက်ကူးလို့ဒေါ်လာ ၈သိန်းတထောင် နဲ့သဘောတူခဲ့ပါတယ်။ (သူမရခဲ့တဲ့ငွေမှ ၃၀ရာကိုင်နုံးအား လူမှုရေးအသင်းအားလှူခဲ့)
ရုရှားနိုင်ငံသူ ရှတန်နီယာ သူမကိုယ်ရေးကိုတာ အရေးပေါ် ငွေလိုအပ်နေလို့ အွန်လိုင်းကနေ ပန်းဦးဆက်ဘို့ ကြော်ငြာတင်ခဲ့ရာမှာရဲအရာရှိတဦးကဒေါ်လာ၂သိန်းခုနှစ်သောင်းကိုးရာငါးဆယ်နဲ့ ပန်းဦးသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
အလီနာ ပါစီအာ အသက်၁၈ နှစ် ရိုမေးနီးယား နိုင်ငံသူမော်ဒယ်ပါ သူမနဲ့ပထမဆုံးည အိပ်ခဲ့တဲ့သူ ရဲ့ အမည်နာမည် ကိုမဖေါ်ပြခဲ့ပါ၊ သူမအတွက် ဒေါ် ၁၄၉ ၀၀ နဲ့တရက်ကိုဒေါ်လာ ထောင်ချီပေးရတဲ့ ကြယ်ငါးပွင့်ဟော်တယ်ကြီးမှာ သူမနဲ့ အတူအိပ်ခဲ့တဲ့ လူကြီးလူကောင်းတဦးကို ဒီကနေ့ အထိသတိယနေပါတယ်တဲ့….။
(၂၅-၁-၂၀၁၈ ရက်ဒေါ်လာပေါက်ဈေးမှာ အမေရိကန် တဒေါ်လာကို မြန်မာငွေ ၁၃၄၂ကျပ်)
ယနေ့အသက်ရှင်ရတာ မနေ့ကထက် အကျိုးရှိဖို့ လိုတယ်…
ယနေ့အသက်ရှင်ရတာ မနေ့ကထက် အကျိုးရှိဖို့ လိုတယ်... မနေ့က ဧရာဝတီ သတင်းးက တက်လာထဲက စိတ်မကောင်းးဘူးး တညလုံးးလည်းးအိပ်လို့ မပျော်ဘူးး သူတို့ သားးအမိတွေ ဘယ်လို အိပ်လို့များး…
နေ့စဉ် မင်္ဂလာဖြင့် မျက်နှာသစ်နည်း..မျက်နှာသစ်တဲ့အခါ ကုသိုလ်(၅)မျိုးကို ရအောင်ယူနည်း
နေ့စဉ် မင်္ဂလာဖြင့် မျက်နှာသစ်နည်း စိတ်သည် မကောင်းမှု၌ မွေ့လျော်တတ်သည်-ဟု ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဟောကြားတော်မူခဲ့သည်။ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ စဉ်းစားလျှင် သတ်မည်, ခိုးမည်, စသော စိတ်ယုတ်စိတ်ယိုင်းများ…
အချစ်ရေးမှာ သေချာပေါက် အနှောင့်အယှက်ပေးနိုင်တဲ့ အကျင့်ဆိုး ၅ခု💖 💘 …
ကျန်းမာရေးအတွက် မနက်ခင်းတိုင်း သောက်ပေးသင့်တဲ့ ဆားရေ ၁ ခွက်…
ဖယောင်းတိုင်လည်း သုံးလို့ရပါတယ် ….! ( ရယ်ရလွန်းလို့ အူတောင် တက်တယ်)
မင်္ဂလာဆောင်မှ နာရေးဖြစ်သွားသော ၀မ်းနည်းစရာစုံတွဲ
မောင်တောဒေသ အကြမ်းဖက်မှု နောက်ကွယ်မှာ ပါကစ္စတန် Isi နဲ့ အကြမ်းဖက်အုပ်စု Isis တို့ ရှိနေကြောင်း အိန္ဒိယနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိများ အတည်ပြု ပြောကြား
ဓါတ်ပုံဆရာရဲ့ဖန်တီးမှုကြောင့် တစ်နယ်စီဝေးနေရတဲ့ လင်မယားနှစ်ယောက် အမှတ်တရလေးဖြစ်ခဲ့ရ…
G-Fatt နဲ့အတူ ပွဲတက်ခဲ့တဲ့ နန်းစုရတီစိုး…
အလုပ်တွေ အလွဲလွဲ အချော်ချော် ဖြစ်နေသူတွေ အတွက်…
ထူးဆန်းထွေလာ အံ့သြဖွယ်ရာ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်လက်ဆေးကန်…